धेरै हजार केटाहरू (र शायद अधिक एक सय बालिका) एक बच्चा उडान को सपना देख्यो र हावा को सपना देख्यो रूपमा। तिनीहरूलाई को केही वास्तविकता सपना र आकाश संग आफ्नो क्यारियर गाँसिएको। अरू सबैका लागि, बस हेलिकप्टर सिम्युलेटर चलिरहेको, एक पायलट जस्तै महसुस गर्न ठूलो अवसर छ।
यस्तो खेल "फ्लाई।" भनिन्छ तिनीहरूले विकल्प, दुवै अनलाइन र आफ्नो कम्प्युटर मा स्थापित एक किसिम मा अवस्थित। तर खेल को समग्र कथा आफ्नो कार्य को एक आफ्नै हेलिकप्टर नियन्त्रण गर्न छ त्यहाँ छ। सिमुलेटर विभिन्न व्याख्याहरु तपाईं एक निश्चित बिंदु गर्न, कुनै पनि कार्गो ओसारपसार गर्न उड सबै शत्रुलाई नष्ट गर्न आवश्यक सबै भन्दा गर्दा बाँकी invulnerable, र यति मा। एन त्यहाँ रोमाञ्चक दौड हेलिकप्टर मा आयोजित जसमा खेल को पनि धेरै छन्। र एक रेडियो-नियन्त्रित हेलिकप्टर सिम्युलेटर चलिरहेको आफ्नो सबैभन्दा कदर बाल्यकाल सपना महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। जबसम्म, पाठ्यक्रम, एक बच्चाको रूपमा तपाईं यस्तो हेलिकप्टर थिए।
त्यहाँ केवल "फ्लाई" छन् कि खेल हो, तर पनि "शूटर।" यो तपाईंको हेलिकप्टर दाँत गर्न सशस्त्र र एक पायलट शत्रु र विस्फोट जमीन लक्ष्य आक्रमण रूपमा आफ्नो कार्य बन्द छ भन्ने हो। खैर, तपाईंको शुद्धता परीक्षण र morale बृद्धि गर्न ठूलो अवसर।
अर्को विभिन्नता प्रहरी हेलिकप्टर सिम्युलेटर छ। तपाईं आफ्नो पाइलटहरूले र पूर्ण खोजहरू, जटिलता र अविलम्बी विभिन्न डिग्री को ठाउँमा आफैलाई पाउन। खेल सुरु, तपाईं धेरै आकर्षक घन्टा hostages को निकासी को, अपराधीहरूलाई, गगनचुम्बी भवनहरू र अन्य खतरनाक कार्यमा ठूलो आगो को परिसमापन पक्रने खर्च हुनेछ। यस्तो विशेष वास्तविक नायक जस्तै महसुस गर्ने मौकाको जो सिमुलेटर र उद्धार हेलिकप्टर, छ।
को रेट्रो-खेल lifelike तस्वीर र ध्वनि, आदिम भिडियो गेम कन्सोल को शैली बनेको स्ट्राइकिङ्, सबै भन्दा आधुनिक देखि - सिमुलेशन हेलिकप्टर पनि खेल गुणस्तर मा फरक हुन सक्छ। उहाँको बाल्यकाल र ponostalgirovat सम्झना गर्न बाटो के हो? समयमा फिर्ता तरल क्रिस्टल प्रदर्शित र ठोस गेमिङ ग्राफिक्स कार्ड दृष्टि छैन हुँदा?
भर्चुअल albeit हेलिकप्टर सिम्युलेटर, तर हावा वाहन कसरी व्यवस्थापन गर्न सिक्न वास्तविक बाटो बाहेक। यो, पाठ्यक्रम, अनुभवी खेलाडी जो कहिल्यै वास्तविक पाङ्ग्रा लागि गरौं भनेर होइन। झन् तथापि, आधुनिक पाइलटहरूले यस्तो भर्चुअल सिमुलेटर मा सिक्न।
प्ले एक हेलिकप्टर सिम्युलेटर मा धेरै सरल छ। नियन्त्रण सामान्यतया बाहिर छ कुञ्जीहरू डब्ल्यू, ए, एस, डी वा तीर बटन। साथै, माउस भर्चुअल खेल को बहुमत लागि आवश्यक छ। तर अक्सर एक सरल अनलाइन बस पर्याप्त मिनी-किबोर्ड सिमुलेटर मा। यो उडान, कमी वा आरोहण, हेलिकप्टर को ढलान, साथै यस्तो उतराई रूपमा विभिन्न अतिरिक्त सञ्चालन, नक्सा वा काम कल इतिहास को दिशा को चयन लागि हो।
छोटो मा, आकाश, हेलिकप्टर सिम्युलेटर को उचाई र गति प्रेम गर्ने सबैलाई एक अविस्मरणीय गेमिङ अनुभव दिन हुनेछ!
Ari मा हाइड। परभक्षी को लिग - Ahri
"Maynkraft" टिभी गर्न कसरी विवरण
आलु सूप: त, फरक यति स्वादिष्ट
छोराछोरीको लालनपालनमा वीरता लागि सम्मानित एक पुरस्कार, - "ह्नञेह्नघ् = महिमा"
BZHU कसरी गणना गर्न: सुविधाहरू, स्तर र सिफारिसहरू
रूसमा सबैभन्दा शक्तिशाली विद्युतीय झटका के हो?
रेस्टुरेन्ट "Tauride बगैचा" (सेन्ट पीटर्सबर्ग): फोटो र समीक्षा
Columnar आलुबखडा: रोपण र हेरविचार। छाँट्ने आलुबखडा columnar
भान्सा मा पर्खालहरु सजाय